Tahriibayaal ka ambabaxay xeebaha Boosaaso oo ku dhintey gacanka Cadmeed – SBC
Tahriibayaal ka ambabaxay xeebaha Boosaaso oo ku dhintey gacanka Cadmeed
Ugu yaraan 10 qof oo tahriibayaal ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen gacanka Cadmeed ka dib markii ay ku neef qabitimeen doonidii ay wateen, sidaasi waxaa shaaca ka qaaday hay’adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR.
Tahriibayaashan ayaa la sheegay in ay u dhasheen wadanka Itoobiya, kuwaais oo laba maalmood ku jirey socdaal dhanka badda ah oo ay ka ambabaxeen xeebaha magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Dadka dhintey ayaa ka mid ahaa 25 qof oo lagu xareeyey qolka matoorka ee doonida kuwaasi oo ay neeftii ku xirantey, taasi oo keentey inay ku caburmaan halkaasi oo isla markaana ay ku dhinteen 10 ka mid ah dadkaasi.
Dadkii soo badbaaday ayaa sheegay in meydadka dadkii ku dhintey doonida lagu tuurey meydkooda badda, sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in afar qof oo kale ay ku dhinteen mawjadaha badda, ka dib markii ay ku qaraqmeen badda gudaheeda, halkaasi oo ay ku daadiyeen ragii doonida watey oo ka cabsi qabey inay qabtaan ciidamada badda ee Yemen.
Erika Feller oo ah masuul sare oo ka tirsan hay’ada UNHCR ayaa sheegay in la soo badbaadiyey 101 qof oo ahaa dadkii doonida saarnaa, kuwaasi oo laga soo helay iyagoo kus ugan xaalad xun xeebaha degmada Al-Hamra.
“Aad ayaan u dhaleecaynaa, habka loola dhaqmayo dadkaasi qaxootiga ah ee raadinaya nolol wanaagsan, amaan, isla mrkaana ka baxsanaya dhibaatooyinka ku xadgudubka xuquuqda aadamaha ee la degay nolasha Bariga Afrika” ayuu yiri Erika Feller.
UNHCR waxay sheegtey in tan iyo bilowgii sanadkan 108 qof ay ku dhinteen xeebaha Gacanka Cadmeed, kuwaasi oo raadinaay nolol wanaagsan, kana baxsanaya xaaladaha ay ku sugan yihiin wadamadooda.